Oculus Mitsefaka: Ny zava-misy virtoaly Facebook headset eto - News Fitsipika
Oculus Mitsefaka: Ny zava-misy virtoaly Facebook headset eto
Headset mialoha-baiko misokatra toy ny mpampiasa Twitter naneho fampitahorana ny vidin-javatra
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Oculus Mitsefaka: Ny virtoaly Facebook headset zava-misy eto - amin'ny vidiny” dia nosoratan'i Nicola Davis, fa ny Mpandinika ny alahady 10 Janoary 2016 00.04 UTC
Universal Music Group - ny marika izay mirehareha Taylor Swift, Justin Bieber sy Madonna ao amin'ny lisitra - no nanambara izany no teaming-niakatra tamin'i iHeartMedia mba "virtualise" ny gig traikefa, miaraka amin'ny fitaovana efa azo mialoha ny mba. Industry manam-pahaizana ao amin'ny fifanarahana: 2016 Mety ho ny taona fa "virtoaly zava-misy" avy ny taona.
Mividy any an-hevitra, na izany aza, dia pricey. Tamin'ny £ 499 for UK mpividy, ny Oculus Mitsefaka boaty dia ahitana headset, sensor, lalao sady mpitahiry, raha manaraka volana, ho an'ny $1,499 (£ 1.030), ny fonosana dia ho azo mialoha ny mba izay ahitana solosaina - tokony ny solosaina findainy fahiny tsy ho tena ho amin'ny hafainganam-pandeha.
Ny vidin'ny Tags ao dia mamoaka consternation, amin'ny maro naka ny Twitter mba haneho ny fampitahorana. Fa araka ny William McMaster, lohan'i VR tao amin'ny London-monina orinasa Visualise, ny Oculus famotsorana dia-dehibe tamin'izay fotoana. "Izany dia ny zavatra VR fanononana headsets handeha ho tahaka ny amin'ny ho avy ho an'ny olon-drehetra,"Hoy izy mampitaha azy io ho amin'ny famotsorana ireo Macintosh voalohany solosaina. And VR-monina haino aman-jery dia efa mikapoka mahazatra: mihoatra manao izay hampisy ny onja vaovao ny lalao, mpanakanto toy ny Björk efa maika ny hanaiky ny teknolojia for clip - tokoa, in Septambra Taylor Swift sy ny ekipany Noraisiko tamin'ny tanana iray Emmy loka noho ny fanatitra AMEX Unstaged: Ny Taylor Swift Experience.
Virtual Gigs ny zava-misy dia ny manaraka sisin. "Mety ho traikefa mahatahotra mba ho afaka hahita ny tarika tena tia any Shina, fa ianao no ao London, [na] mifamadika amin'izay,", Hoy i John Oswald, ny tale ao amin'ny famolavolana sy ny zava-baovao mafy Fjord. McMaster, mino fa ny tena mety ho tany am-boalohany adopters izay vonona ny hanosotra avy. "Moa ve ny olona eo ho eo ny handeha hivoaka ka mandany £ 500 amin'ny VR headset sy £ 1000 amin'ny lalao PC? angamba tsy," hoy izy. Piers Harding-Rolls, talen'ny Lalao amin'ny orinasa mpandalina IHS Teknolojia, manaiky. "Ny fanombohana headsets ireo amin'ity taona ity dia tsy tena mikasika ny tsena faobe," hoy izy, nampiany hoe antenainy Gamers ka nanao Gadget-fiends mba ho voalohany ny akora avy. "Mihevitra aho fa tsy maintsy ho zava-misy fotsiny ny fomba haingana dia handeha ho natsangana,"Hoy izy nanampy. "Fa ny avo-fitaovana farany isika manantena, manerantany, latsaky ny telo tapitrisa mba hamidy amin'ity taona ity manerana ny fitaovana rehetra. "
Ny Oculus Mitsefaka Tsy ny mpanjifa ihany no VR traikefa dia afaka manantena ny hahazo ny misaintsaina taona ity: HTC dia nametraka ny hanomboka ny ara-barotra dikan-ny headset, Vive, tamin'ny volana Aprily raha ny PlayStation Sony VR koa nomanina ho famotsorana in 2016. Ho an'ireo miaraka amin'ny teti-bola ambany na Google baoritra sy Gear VR, ny mpiara barotra eo amin'ny Samsung Electronics sy Oculus, efa misy, mampiasa ny finday mba namorona ny tontolo virtoaly. saingy, hoy i, McMaster, ny Oculus Mitsefaka dia "an-tampon-tsipika, karazana Ferrari "rehefa VR headsets. "Inona ny Oculus Rift afaka manao toy ny tapa-teknolojia dia zavatra iray mora VR headset ho afaka atao amin'ny roa taona," hoy izy.
Oswald mino fialam-boly fotsiny ny fiandohan'ny VR ny mety. "Moa ny mozika zavatra fifandraisana? Heveriko fa tena fomba lalina noho ny," hoy izy, nampiany hoe mety ho Boon raha ny amin'ny fahalalana sy ny fitsaboana aretina. Ny hafa, koa, mino VR dia nametraka mitombo. "Heveriko fa ny fitantarana sarimihetsika-kevitra, ary 360[-diplaoma] Video, dia handeha ho tena lehibe iray,"Hoy i McMaster, izay ihany koa ny mahita ny dokambarotra ho toy ny faritra manan-danja ho an'ny teknolojia. "Fifandraisana no goavana hafa anankiray ho VR,"Hoy izy nanampy. "Izany no mahatonga Facebook Oculus nividy indray ao amin'ny 2014 - Fa toy ny fifandraisana sehatra dia mety tsy mampino. "
← 10 mamirapiratra fanitsiana dia tokony handinika Apple ho an'ny iPhone 7 Vao nifoka smartphone [VIDEO] →